Neken'i Jesosy - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > Fiainana miaraka amin'Andriamanitra > Nosoratan'i Jesoa
Matetika ny Kristiana dia manambara amim-pifaliana hoe: "Jesosy manaiky ny olona rehetra" ary "tsy mitsara na iza na iza". Na dia azo antoka aza ireo toky ireo dia hitako fa nomena dikany maro samihafa izy ireo. Mampalahelo fa ny sasany amin'izy ireo dia miala amin'ny fanambaran'i Jesosy araka ny nambara tamintsika tao amin'ny Testamenta Vaovao.
Ao amin'ny faritry ny Grace Communion International, ny teny hoe: "Anananao" dia matetika no ampiasaina. Ity fanambarana tsotra ity dia maneho lafiny iray lehibe. Saingy izy io koa dia azo adika amin'ny fomba samihafa. Inona marina no fananantsika? Ny famaliana ireo fanontaniana ireo sy ny mitovy amin'izany dia mitaky fitandremana, satria amin'ny finoana dia tokony hikatsaka ny hanokana fanontaniana mitovy amin'izany isika mba hahalavorary sy marina amin'ny fanambarana ara-Baiboly.
Mazava ho azy fa niantso ny olona rehetra hanatona azy i Jesosy, nanolotra ny tenany izy ho an'izay rehetra nitodika tany aminy ary nanome azy ireo ny fampianarany. Eny, nampanantena izay rehetra nihaino azy izy fa hitaona ny olona hanatona azy (Jaona 12:32). Eny tokoa, tsy misy porofo milaza fa nivily izy, nivily, na nandà hanatona olona manatona azy. Fa kosa, dia nandinika ireo izay noheverina ho noroahin'ireo mpitondra fivavahana tamin'ny androny izy, ary niara-nisakafo tamin'izy ireo mihitsy aza.
Mahagaga fa fantatry ny Baiboly ny milaza fa noraisin'i Jesosy koa ny boka, ny mandringa, ny jamba, ny marenina ary ny moana ary nifampiresaka tamin'izy ireo. Nifandray tamin'ny olona foana izy (ny sasany amin'izy ireo dia manana laza tsara), na lahy na vavy, ary ny fomba nitondrany azy ireo dia tsy niraharaha ireo zavatra ninoana tamin'ny androny. Nifandray tamin'ny mpanitsakitsa-bady ihany koa izy, mpamory hetra jiosy teo ambanin'ny fiandrianam-pirenen'i Roma ary na dia tamin'ireo mpikatroka mafàna fo, anti-Romana, aza.
Nandany fotoana niaraka tamin'ny Farisianina sy Sadoseo koa izy, mpitondra fivavahana izay anisan'ireo mpitsikera mafy azy (ary ny sasany amin'izy ireo dia mikasa ny hamono azy). Ny apostoly Jaona dia milaza amintsika fa Jesosy tsy tonga hanameloka, fa hamonjy sy hanavotra ny olona noho ny Tsitoha. Hoy Jesosy: "[...] na iza na iza manatona Ahy dia tsy horoahiko hiala izy" (Jaona 6:37). Nomeny toromarika koa ny mpianany mba ho tia ny fahavalony (Lio 6:27), hamela ny heloky ny olona nanao ratsy azy ireo ary hitahy ireo izay manozona azy ireo (Lio 6:28). Rehefa novonoina ho faty Izy dia namela ny helok'ireo namono azy mihitsy aza (Lk 23:34).
Ireo ohatra rehetra ireo dia mampiseho fa nahasoa ny olona rehetra Jesosy. Teo amin'ny ilan'ny olona rehetra izy, "natao" ho an'ny olona rehetra. Mitoetra ho fahasoavana sy fanavotan'Andriamanitra izany, izay tafiditra ao daholo. Ny ampahany sisa amin'ny Testamenta Vaovao dia maneho ny voahaja
hitantsika ao amin'ny Evanjely tamin'ny andron'i Jesosy. Nasongadin'i Paoly fa tonga tety an-tany Jesosy mba hanonitra ny fahotan'ny ratsy fanahy, ny mpanota, ireo "maty noho ny [...] fandikan-dalàna sy fahotana" (Efesiana 2: 1).
Ny fihetsika sy ny fihetsiky ny Mpamonjy dia mijoro ho vavolombelona ny amin’ny fitiavan’Andriamanitra ny olona rehetra sy ny faniriany hihavana sy hitahy ny rehetra. Tonga mba hanome fiainana “be dia be” i Jesosy ( Jaona 10:10 ; Baiboly Vaovao Tsara). “Tao amin’i Kristy Andriamanitra ka nampihavana izao tontolo izao taminy” (2. Korintiana 5:19). Tonga Jesosy amin’ny maha-Mpanavotra azy hanavotra ny fahotan’ny tenany sy ny faharatsian’ny voafonja hafa.
Misy maromaro kokoa anefa amin'ity tantara ity. Ny "bebe kokoa" dia tsy azo jerena amin'ny fifanoherana na amin'ny fifanolanana misy eo amin'ny iray izay nanazava fotsiny. Mifanohitra amin'ny fomba fijerin'ny sasany, tsy ilaina ny mihevitra fa misy toerana mifanipaka ao am-pon'i Jesosy, ao amin'ny fisainany ary amin'ny hoaviny. Tsy ilaina ny mamantatra fihetsika mandanjalanja ao anatiny amin'ny karazany rehetra izay miezaka amin'ny lafiny iray ary avy eo manitsy ny iray hafa. Tsy mila mino ny iray fa nanandrana nampihavana ny lafiny roa amin'ny finoana i Jesosy izay manondro amin'ny lalana samihafa, toa ny fitiavana sy ny fahamarinana na fahasoavana ary fahamasinana. Mety mieritreritra fisian-javatra mifanohitra toy izany isika amin'ny fahotantsika, kanefa tsy mitoetra ao am-pon'i Jesosy na ny Rainy.
Tahaka ny Ray dia mandray tsara ny rehetra i Jesosy. Ataony amin'ny fangatahana manokana anefa izany. Ny fitiavany dia fika-jotra. Avelany ny olona rehetra hihaino azy hanambara zavatra izay nafenina azy. Tonga hametraka fanomezana manokana izy ary hanompo ny olon-drehetra araka ny lalana sy manao tanjona.
Ny fandraisana azy tsara amin'ny olona rehetra dia tsy ny teboka farany noho ny fiandohan'ny fifandraisana maharitra sy maharitra. Izany fifandraisana izany dia momba ny fanomezana sy ny fanompoana ary ny fanekentsika izay atolony antsika. Tsy manolotra na inona na inona lany andro antsika izy, na manompo antsika amin'ny fomba taloha (araka izay itiavantsika azy). Fa ny tsara indrindra omeny no omeny antsika. Ary izany dia ny tenany. Ary amin'izany dia omeny antsika ny lalana sy ny fahamarinana ary ny fiainana. Tsy misy zavatra hafa ary tsy misy zavatra hafa.
Ny toe-tsain'i Jesosy sy ny fandraisana andraikitra nataony dia mitaky fihetsika sasantsasany amin'ny fanomezana azy, ary raha ny marina, dia mila manaiky ny zavatra omeny izy. Mifanohitra amin'izany fihetsika izany, ny fanekena ny fankasitrahany, dia ny zavatra nolaviny, izay toa ny fandavany ny tenany. Amin'ny fisintonana ny olona rehetra hanatona ny tenany, dia manantena valiny tsara i Jesosy. Ary raha ny tsikariny, ny valiny tsara dia mitaky fiheverana manokana azy.
Ka dia nambaran'i Jesosy tamin'ny mpianany fa akaiky azy ny fanjakan'Andriamanitra. Ny tsodrano rehetra dia efa afaka ao anatiny. Saingy izy dia nanasongadina avy hatrany ny fihetseham-po izay tsy maintsy tafiditra ao anatin'ny tena fahamarinana marina: Ny fandàvana hibebaka sy mino an’i Jesosy sy ny fanjakany dia fanina lehibe rehefa mandà ny tenany sy ny fitahian’ny fanjakany.
Ny fahavononan'ny fibebahana dia mitaky toetra manetry tena. Jesosy dia manantena tanteraka ny fanekena ny tenany rehefa mandray antsika izy. Satria amin'ny fanetren-tena ihany no ahazoantsika izay atolotray azy. Marihina fa efa nomena antsika ny fanomezana talohan'ny nitrangan'izany fanehoan-kevitra izany. Ny fanamafisana dia fanomezana omena antsika izany izay mahatonga ny fihetseham-po.
Ny fibebahana sy ny finoana no fanehoan-kevitra miaraka amin'ny fanekena ny fanomezan'i Jesosy. Tsy fepetra takiana amin'izany ireo, ary tsy maninona na iza na iza manao izany. Tsy maintsy ekena ny tolotra omeny ary tsy holavina. Inona no tombontsoa mety hitranga amin'ny fandavana izany? No.
Ny fanekena tamim-pankasitrahana ny sorompanavotany izay notadiavin'i Jesosy foana, dia naseho tamin'ny teniny marobe hoe: "Tonga ny Zanak'olona hitady sy hamonjy ny very" (Lk. 19:10; Good News Bible). "Tsy ny salama no mila dokotera, fa ny marary" (Lk. 5:31; ibid.). "Lazaiko aminareo marina tokoa: Izay tsy mandray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy hiditra ao." (Marka 10:15). Tokony hitovy amin'ny tany mpandray voa izay "mandray ny teny amin'ny fifaliana" isika (Lk. 8: 13). "Katsaho aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany [...]" (Matio 6:33).
Ny fanekena ny fanomezam-pahasoavan'i Jesosy sy hankafizany ny tombotsoany dia mitaky fanekena fa very ary mila mahita isika, marary isika ary mila dokotera hanasitrana antsika, fa tsy manana fanantenana ny hifanakalo hevitra miaraka aminy isika manatona ny Tompontsika. tanana foana. Satria toy ny zaza, dia tsy tokony hieritreritra isika fa manana zavatra ilainy. Noho izany dia nanipika i Jesosy fa ireo izay "mahantra ara-panahy" no mahazo ny fitahian'Andriamanitra sy ny fanjakany fa tsy ireo izay mihevi-tena ho manankarena ara-panahy (Matio 5: 3).
Ny fampianarana kristiana dia nampiavaka ilay fanekena nomen'Andriamanitra ny fahalalahan-tanana nomeny ny zavaboary rehetra ao amin'i Kristy ho fihetsika manetry tena. Toe-tsaina izay ifandraisan-tanana amin'ny fanekena fa tsy mahavita tena isika, fa tsy maintsy mahazo fiainana avy eo an-tanan'ny Mpamorona sy Mpanavotra antsika. Ny mifanohitra amin'izany fanekena matoky izany
Ny fiheverana dia izany rehareha izany. Mifandraika amin'ny fampianarana kristiana, ny fahatsapana ny fahaleovan-tena amin'Andriamanitra, ny fahatokiana ny tena irery, amin'ny fahaizan'ny tena manokana, na eo imason'Andriamanitra aza. Ny avonavona toy izany dia manafintohina amin'ny fiheverana ny mila zavatra an'Andriamanitra izay zava-dehibe, ary indrindra fa ny famelana sy ny fahasoavany. Ny avonavona avy eo dia mitondra an'io fandavanan-tena marina io hanaiky zavatra tena ilaina avy amin'ilay Tsitoha, izay azo inoana fa azo karakaraina. Ireharehantsika ny mahavita ny zava-drehetra samirery ary mendrika ny hijinja ireo vokatra vokarina isika. Manizingizina izy fa tsy mila ny fahasoavana sy ny famindram-pon'Andriamanitra, fa ny hahafahany manomana ny tenany amin'ny fiainana izay ilain'ny tenany ihany. Ny avonavona tsy mahavita na iza na iza amin'ny andrim-panjakana, anisan'izany Andriamanitra. Maneho ny zava-misy izy fa tsy misy na inona na inona ao amintsika mila miova. Ny fomba fanaontsika, tsara izany ary tsara tarehy. Mifanohitra amin'izany, ny fanetren-tena dia manaiky fa tsy afaka mifehy ny aina ianao. Fa tsy nanaiky hila fanampiana fotsiny izy, fa ny fanovana, ny fanavaozana, ny famerenana indray ary ny fampihavanana, izay Andriamanitra irery ihany no afaka manome. Ny fanetren-tena dia manaiky ny tsy fahombiazantsika tsy manam-petra sy ny tsy fananantsika tsy manam-petra hampiasana fanavaozana ao amintsika. Mila ny fahasoavan'Andriamanitra rehetra isika, raha tsy izany. Ny avonavona dia tsy maintsy ho faty mba hahafahantsika mahazo fiainana avy amin'Andriamanitra. Ny misokatra malalaka handray ny zavatra tian'i Jesosy ho antsika sy ny fanetren-tena dia tsy azo sarahina.
Amin’ny farany, Jesosy dia mandray ny olona rehetra hanolotra ny tenany ho azy ireo. Miompana amin’ny tanjona àry ny fandraisana azy. Mandeha any ho any. Ny anjarany dia tsy maintsy ahitana izay mitaky ny fandraisana ny tenany. Nanoro hevitra antsika i Jesosy fa tonga Izy mba hahafahan’ny Rainy hivavahana (Jao 4,23). Izany no fomba feno indrindra hanehoana ny tanjon'ny fandraisana sy fanekena ny tenantsika. Ny fanompoam-pivavahana dia mampiseho mazava tsara hoe iza Andriamanitra amin’ny maha-mendrika ny fitokisantsika sy ny tsy fivadihantsika tsy mihozongozona. Ny fanoloran’i Jesosy ny tenany ho amin’ny fahalalana marina ny Ray sy ny fahavononana hamela ny Fanahy Masina hiasa ao aminy. Izany dia mitarika amin’ny fanompoam-pivavahana amin’Andriamanitra irery ihany amin’ny alalan’ny Zanaka eo ambanin’ny asan’ny Fanahy Masina, izany hoe ny fanompoana an’Andriamanitra amin’ny fahamarinana sy amin’ny Fanahy. Satria tamin’ny nanolorany ny tenany ho antsika, Jesosy dia nanao sorona ny tenany ho Tompontsika, mpaminany, mpisorona ary Mpanjakantsika. Izany no manambara ny Ray sy mandefa ny Fanahy Masina ho antsika. Manome araka ny maha-izy azy izy, fa tsy hoe iza izy, ary tsy araka ny faniriantsika na ny hevitsika.
Ary midika izany fa ny lalan'i Jesosy dia mitaky fitsarana. Toy izao ny fomba fanasokajiana azy. Manaiky ireo manaratsy azy sy ny teniny, ary koa ireo manohitra ny fahalalana marina an’Andriamanitra sy ny fivavahany marina. Izy dia manavaka an'izay mandray sy izay tsy. Na izany aza, io tsy fitovian-kevitra io dia tsy midika fa ny fihetsiny na ny hetahetany dia samy hafa amin'ny fomba nasehontsika etsy ambony. Noho izany dia tsy misy antony tokony hiheverana fa mihena ny fitiavany araka ireo tomban-keviny ireo na nivadika ho mifanohitra amin'izany. Jesosy dia tsy manameloka ireo mandà ny fandraisana azy, ny fanasana azy hanaraka azy. Mampitandrina azy ireo anefa ny vokatr’izany fandavana izany izy. Ny fanekena an'i Jesosy sy ny hiaina ny fitiavany dia mitaky fihetsika iray na tsia na tsia.
Miharihary any amin’ny toerana maro ao amin’ny Soratra Masina ny fanavahana nataon’i Jesosy teo amin’ireo valinteny samihafa azony. Noho izany, ny fanoharana momba ny mpamafy sy ny voa (izay itoeran’ny voa dia ny teniny) dia miteny amin’ny fiteny tsy mety diso. Miresaka karazana tany efatra samihafa isika, ary faritra iray ihany no maneho ny fahavokarana mamoa andrasana amin’i Jesosy. Amin'ny toe-javatra maro dia mandeha amin'ny fomba handraisana azy an-tsitrapo na holavina ny tenany, ny teniny na ny fampianarany, ny Rainy any an-danitra sy ny mpianany. Rehefa niala taminy ny mpianatra maro ka nandao Azy, dia nanontany i Jesoa raha mba te hanao toy izany koa ireo roa ambin’ny folo lahy izay niaraka taminy. Izao no valin-teny malaza nataon’i Petera: “Tompo ô, hankaiza izahay? Ianao no manana ny tenin’ny fiainana mandrakizay.” (Jaona 6,68).
Hita taratra amin’ny fanasany toy izao ny teny fampidirana fototra nataon’i Jesosy, izay nentiny ho an’ny olona: “Manaraha Ahy [...]!” ( Marka. 1,17). Hafa ny manaraka azy sy ny tsy manaraka azy. Ampitahain’ny Tompo amin’ireo izay manaiky fanasana ho amin’ny fampakaram-bady ireo manaraka azy, ary mampitaha azy ireo amin’ireo izay mandà ny fanasana.2,4-9). Miharihary koa ny tsy fitovian-kevitra toy izany amin’ny fandavan’ilay lahimatoa tsy hanatrika ny fanasana amin’ny fiverenan’ny zandriny, na dia namporisika azy ho avy aza ny rainy (Lioka 1.5,28).
Fampitandremana maika no avoaka ho an’ireo izay tsy mandà ny hanaraka an’i Jesosy fotsiny, fa mandà ny fanasany koa, ka manakana ny hafa tsy hanaraka azy ary indraindray manomana mangingina ny tany hamonoana azy (Lio. 11,46; Matthew 3,7; 23,27-29). Maika ireo fampitandremana ireo satria milaza izay lazain’ny fampitandremana fa tsy tokony hitranga fa tsy izay antenaina hitranga. Ny fampitandremana dia omena ho an'ireo izay tiantsika, fa tsy ireo izay tsy misy ifandraisantsika. Fitiavana sy fanekena mitovy no aseho amin’ireo izay manaiky an’i Jesosy sy ireo izay mandà Azy. Tsy ho tso-po koa anefa ny fitiavana toy izany, raha tsy mitodika amin’ny fihetseham-po samihafa sy ny vokatr’izany.
Jesosy dia mandray ny olon-drehetra ary miantso azy roa tonta mba hisokatra aminy sy ho vonona - ny fanjakan'ny fanjakan'Andriamanitra. Na dia miely patrana aza ny tambajotra ary miparitaka na aiza na aiza ny voa, ny fanekena ny tena, ny fahatokisana azy ary ny mpandimby azy dia mila fihetsika iray. Noharin'i Jesosy tamin'ny faneken'ny zaza iray izy ireo. Miantso ny fahatsapana fandraisana an-tsaina toy izany izy na ny fahatokiana napetraka taminy. Anisan'izany ny fibebahana hametraka ny fahatokisan-tena farany amin'ny olon-kafa na zavatra hafa. Io finoana io dia miseho amin'ny fanompoana an'Andriamanitra amin'ny alalany amin'ny alalàn'ny Fanahy Masina. Homena ny olon-drehetra tsy misy famandrihana io fanomezana io. Tsy misy fepetra fepetra ahafahan'ny mpahazo tombontsoa mety hanjaka. Ny fanekena io fanomezana tsy misy fepetra io kosa, dia mifamatotra amin'ny ezaka atao amin'ny mpandray. Izany dia mitaky ny fialànany tanteraka amin'ny fiainany sy ny fanolorany an'i Jesosy, ny Ray ary ny Fanahy Masina miaraka aminy. Ny fiezahana dia ny tsy handoa na inona na inona amin'ny Tompo hany ka mirona hamoy ny tenany ho antsika izy. Io no fiezahana manafaka ny tanantsika sy ny fontsika handraisana azy ho Tompontsika sy Mpamonjy antsika. Izay azontsika maimaim-poana dia mifamatotra amin'ny ezaka ataontsika mba hahafahantsika mandray anjara amin'izany; satria ny fialana amin'ny taloha, ny ego ratsy dia tsy maintsy mahazo aina vaovao.
Ny tokony handraisantsika ny fahasoavana tsy misy fepetra avy amin'ny Soratra Masina dia voalazan'ny Soratra Masina rehetra. Ao amin'ny Testamenta Taloha dia milaza fa mila ny fo vaovao sy ny fanahy vaovao isika, izay omen'Andriamanitra antsika indray andro any. Ny Testamenta Vaovao dia milaza amintsika fa mila teraka indray ara-panahy isika, mila olom-baovao, mijanona tsy hiaina amin'ny tenantsika ary tsy hiaina fiainana eo ambany fitondran'i Kristy izay ilaintsika fanavaozana ara-panahy - vao avy noforonina taorian'ny Ataovy izay hahatonga an'i Kristy ho Adama Vaovao. Ny Pentekosta dia tsy hoe ny fandefasan'Andriamanitra ny Fanahy Masina fotsiny no handova ao aminy, fa koa amin'ny fanekena antsika ny Fanahy Masiny, ny Fanahin'i Jesosy, ny Fanahin'aina, dia tsy maintsy mandray azy ao anatintsika ary ho tanteraka aminy.
Ny fanoharan’i Jesosy dia mampiseho mazava fa ny fihetsika andrasana amin’ny fandraisana ny fanomezana natolony antsika dia mitaky ezaka avy amintsika. Eritrereto ny fanoharana momba ny perla sarobidy sy ny fividianana tany hihazona harena. Ireo izay mamaly tsara dia tsy maintsy mahafoy izay rehetra ananany mba hahazoana izay hitany3,44; 46). Fa izay manao loha laharana ny zavatra hafa - na tany, na trano, na fianakaviana - dia tsy handray an'i Jesosy sy ny fitahiany (Lio. 9,59; Lioka 14,18- iray).
Ny fifandraisan’i Jesosy tamin’ny olona dia mampiseho mazava fa ny fanarahana azy sy ny fandraisana ny fitahiana rehetra avy aminy dia mitaky ny fialana amin’izay rehetra mety ho sarobidy kokoa noho ny Tompontsika sy ny fanjakany. Anisan’izany ny fandavana ny fikatsahana harena ara-nofo sy ny fananany. Tsy nanaraka an’i Jesosy ilay mpanapaka, satria tsy afaka nizara ny fananany. Vokatr’izany dia tsy afaka nandray ny soa natolotry ny Tompo koa izy ( Lioka 18:18–23 ). Na dia ilay vehivavy voaheloka ho nijangajanga aza dia nahatsapa ho voantso hanova ny fiainany amin’ny fomba fototra. Rehefa voavela heloka izy, dia tsy nanota intsony (Jao 8,11). Eritrereto ilay lehilahy teo amin’ny dobo Betesda. Tsy maintsy nivonona izy handao ny toerany teo sy ny tenany narary. “Mitsangàna, ento ny fandrianao, ka mandehana!” (Jaona 5,8, Baiboly Vaovao Tsara).
Jesosy nandray ny olon-drehetra ary nanaiky azy ireo, fa ny fihetsiketsahana taminy dia tsy mamela olona tahaka ny teo aloha. Tsy ho tiana am-pitiavana ny Tompo raha navelany fotsiny izy ireo rehefa nahita azy ireo teo am-piangonana voalohany. Tiany be loatra isika ka avelany hohanin'ny fananana mangoraka fotsiny isika na fanehoam-pitiavana ny fahatongavanay. Tsia, manasitrana ny fitiavany, manova sy manova ny fomba fiainana.
Raha fintinina dia manambara hatrany ny Testamenta Vaovao fa ny fandavana ny tenantsika dia ny fandavana ny tenantsika (miala amin'ny tenantsika) ny valin'ny fanolorana tsy misy fepetra ho an'ny tenany, anisan'izany izay rehetra nomaniny ho antsika. Tafiditra ao anatin’izany ny fandatsahana ny avonavontsika, ny fandavana ny fahatokisan-tenantsika, ny fitiavam-bavaka, ny fanomezam-pahasoavana ananantsika ary ny fahaizantsika, anisan’izany ny fanomezantsika hery eo amin’ny fiainantsika. Amin’io lafiny io, dia nanazava tamin’ny fomba nanafintohina i Jesosy fa raha ny amin’ny fanarahana an’i Kristy, dia tsy maintsy “misaraka amin’ny ray sy ny reny” isika. Ankoatra izany, ny fanarahana azy dia midika fa tsy maintsy manapaka ny fiainantsika ihany koa isika - miaraka amin'ny fiheverana diso fa afaka manao ny tenantsika ho tompon'ny fiainantsika isika ( Lioka 14: 26-27 , Baiboly Vaovao Mahafaly). Rehefa mifandray amin’i Jesosy isika dia tsy mivelona ho an’ny tenantsika intsony (Romana 14:7-8) satria an’olon-kafa isika (Romana ).1. Korintiana 6,18). Amin’izany heviny izany isika dia “mpanompon’i Kristy” (Efes 6,6). Eo an-tanany tanteraka ny fiainantsika, eo ambany fitarihany sy ny fitarihany. Isika dia izay maha-izy antsika azy. Ary satria iray amin’i Kristy isika, dia “tsy izaho intsony no velona, ​​fa Kristy no velona ato anatiko” (Galatiana 2,20).
Tena manaiky ny olona rehetra i Jesosy ary mandray azy. Maty ho an'ny olona rehetra izy. Ary mihavana amin'ny olona rehetra izy - saingy izany rehetra izany amin'ny maha Tompontsika sy Mpanavotra antsika. Ny fandraisana sy fanekena ny tenantsika dia fanolorana, fanasana izay mila fanehoan-kevitra, fahavononana handray. Ary io fahavononana ekena io dia mifamatotra tsy hanaiky ny maha izy azy, tahaka ny maha izy azy, fa vonona handray antsika - tsy misy ary tsy misy. Midika izany fa ny fanehoan-kevitra ataontsika dia misy ny fibebahana - ny fanesorana ny zavatra rehetra manakana antsika tsy handray izay omeny antsika, ary izay mijoro amin'ny lalan'ny fiarahantsika aminy sy ny fifaliana hiaina ao amin'ny fanjakany. Ny fanehoan-kevitra toy izany dia misy ezaka - fa ezaka izay mendrika ananana. Satria amin'ny fahaverezan'ny tenantsika taloha dia mahazo tena vaovao isika. Mamorona toerana ho an'i Jesosy isika ary mahazo fahasoavana tsy misy fiovana amin'ny fiainany. Jesosy dia mandray antsika na aiza na aiza hijoroantsika mitondra antsika eny amin'ny lalany mankany amin'ny Rainy ao amin'ny Fanahy Masina ankehitriny sy ho mandrakizay, amin'ny maha-zaza teraka ara-panahy azy tanteraka.
Iza no te handray anjara amin'ny zavatra kely kokoa?